Fantaro ireo kandidà hifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2018 5:02 GMT
Zava-misy tamin'ny toeram-pandahatsaham-bato ao Meksika. Sary avy amin'ny ProtoplasmaKid nampiasana ny lisansa CC-BY-SA 4.0.
Andiany faharoa amin'ireo fizarana efatra momba ny fifidianana ho avy ao Meksika amin'ny 1 Jolay 2018 ity:
Tamin'ny Fizarana I, niresaka fohy momba ny tantara ambadiky ny fifidianana ao Meksika sy ny tontolon'ny fandatsaham-bato manaraka isika. Ankehitriny, hijery ireo kandidà maniry hitondra ny firenena izay ahitana olom-pirenena – tahaka ny any amin'ny faritra maro hafa manerantany – tsy faly amin'ny saranga politika amin'ny ankapobeny, ary indrindra amin'ireo tranga ratsy isan-karazany momba ny fihoaram-pefy sy ny kolikoly tao anatin'ny taona vitsy lasa.
Ampahafantarinay ireo mpifaninana ho lasa filoham-pirenena manaraka:
Ny famerenana ny fandriampahalemana dia midika fa manana asa azo antoka sy tsara karama ny olona. Noho izany antony izany, ao amin'ny governemantako, hamoaka fepetra ho an'ny fampiasam-bola bebe kokoa sy ho an'ny morelianos [mponina ao amin'ny tanàna Meksikana Morelia] mba hiaina tsara kokoa izahay.
Ricardo Anaya Cortés no kandidà ao amin'ny Partido Acción Nacional (PAN) miaraka amin'ny Partido de la Revolución Democrática (PRD) sy ny “Movimiento Ciudadano” (MC). Voatsikera noho ny fampiraisana ny antoko mpandala ny nentin-drazana, elatra ankavanana (PAN) miaraka amin'ny antoko hita ho liberaly na elatra havia (PRD) ity fikambanana lehibe ity.
Anaya, 39 taona, no kandidà tanora indrindra. Tsy mbola nitazona toerana ambony (nofidiana) teo amin'ny sampana mpanatanteraka ao amin'ny governemanta izy, saingy efa mpanao lalàna tao amin'ny ambaratonga eo an-toerana sy federaly kosa.
Niampanga azy tamin'ny kolikoly ireo mpanaratsy azy, noho izy manana trano indostrialy izay voarohirohy – araka ny filazan'ireo mpitsikera azy – tamin'ny tranga fanadiovam-bola.
Sioka an-tsary: Tsy hifidy kandida izahay, fa filoha iray, tsy misalasala aho ary koa ianao fa izaho no tsara indrindra.
Sioka an-tsoratra: Tsy manam-pisalasalana aho
Tsy mpikambana ofisialy ao amin'ny Partido Revolucionario Institucional (PRI), notendrena ho kandidà filoham-pirenen'ny antoko i José Antonio Meade Kuribreña. Nitàna toerana maromaro teo amin'ny fitantanam-panjakana izy, nandritra ny fitondran'ny PAN sy nandritra ny fiadidian'i Enrique Peña avy ao amin'ny PRI. Anisan'ny toerana nosahaniny ny sekreteran'ny raharaham-bahiny, sekreteran'ny tetibola sy ny volam-panjakana, sekreteran'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ary sekreteran'ny angovo.
Ankoatra ny maha-kandidan'ny PRI azy, misolo tena ny Partido Verde Ecologista de México (Antoko Maintso mpandala ny tontolo iainana ao Meksika na PVEM) ary ny Partido Nueva Alianza (Antokon'ny Firaisankina Vaovao PANAL) ihany koa izy.
Na dia tsy voampanga mivantana tamin'ny kolikoly aza i Meade, nitarika ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-tsosialy izy izay tafiditra tamin'ny resaka fitakiam-bola tsy ara-dalàna navoakan'ireo mpanao gazety mahaleo tena sy ny fikambanana tsy miankina miady amin'ny kolikoly tamin'ny fanadihadiana antsoina hoe “La Estafa Maestra” [Mpifehy ny Hosoka]. Ankoatra izany, filohan'ny Minisiteran'ny ny Angovo nandritra ny fotoana fohy tamin'ny fanomanana ny fanavaozana lalàmpanorenana momba ny angovo izy.
Handresy amin'ny voalohan'ny volana Jolay isika ary tsy hamela ny vahoaka. Ny fahefana ihany no mampisy dikany, sy lasa manana hasina, rehefa mametraka ny tenany ho amin'ny fanompoana ny hafa.
Amin'ity fifaninanana ity, misolo tena ny antoko politika naoriny Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) i Andrés Manuel López Obrador. Efa kandidà filoham-pirenena indroa izy teo aloha. Nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2006 (amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny PRD), nanambara ny tenany ho “filoham-pirenena ara-drariny” izy ho setrin'ny vokatra tsy mahomby.
Efa lehiben'ny governemantan'i Mexico City i López (fantatra amin'ny anarana hoe AMLO amin'ny litera fanombohan'ireo anarany). Nandritra ny fe-potoana niasany, maro ireo trangan-kolikoly niseho izay nahasaringotra ireo mpiara-miasa aminy akaiky indrindra; iray tamin'izy ireo i René Bejarano, izay gaga tamin'ny fandraisana vola an-tapitrisa dolara, izay voaraikitra tamin'ny lahatsary ary navoaka tamin'ny fandaharam-baovaom-panjakana.
Ny tolo-kevitr'i López no malaza indrindra sy mora fantatra indrindra. Nampiditra amin'ny mety hanomezana famotsoran-keloka ho an'ireo nanao heloka bevava sasany tamin'ny sehatry ny fifandonana mitam-piadiana sy hanitsy indray ireo fanaovazana mampiady hevitra natao nandritra ny fe-potoam-piasan'ny filoha amin'izao fotoana izao izy, indrindra fa ireo eo amin'ny angovo sy ny fampianarana. Mahita azy ho mpandrendrim-bahoaka indrindra amin'ireo kandidà ny mpitsikera azy.
Raha hita fa antoko liberaly na elatra havia ny MORENA, ao anatin'ny fifaninanana ho filoham-pirenena, hita miaraka tamin'ny Partido Encuentro Sociall (Antoko Fihaonana Ara-tsosialy PES), malaza amin'ny fandalàna ny nentin-drazana hiringiringy izy.
Sioka an-tsary: Teraka niaraka tamin'ireo mpitsara sy mpitsara ambony ato amin'ity firenena ity ny tsimatimanota.
Sioka an-tsoratra: Ilaina ny manadio ny rafitra voakolikoly avy eny an-tampony ary ho ataoko izany. Nahoana? Satria mendrika fahamarinana i Meksika, ary mihaino ny olom-pirenena isika, ambonin'izany, afaka mahatsiaro ho tony sy matoky ny manampahefany izy ireo. Ampitao raha tianao hifarana ny kolikoly.
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, fantatra amin'ny hoe “El Bronco” dia mirotsaka ho kandidà mahaleotena, na dia efa mpikambana tao amin'ny PRI aza izy taloha. Governoran'i Nuevo León izy ankehitriny, toerana azony tamin'ny maha-mahaleotena azy.
Niadian-kevitra be ny fidiran'ny “El Bronco’s” tao anaty latsa-bato, satria nanamarika tsy fanarahan-dalàna maromaro tamin'ny fepetra takiana araka ny lalàna amin'ny firotsahany ho kandidà ny manampahefam-pifidianana. Tamin'ny farany, dia ny fitsarana no nandidy fa afaka mirotsaka ho kandidà i Rodriguez.
Ny tolo-keviny tena mampiadi-hevitra indrindra dia ny “fanapahana” ny tanan'ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly. Naneho izany hevitra izany tamin'ny adihevitra voalohany teo amin'ireo kandidà tamin'ny faran'ny volana Aprily 2018 izy, ary tsy nisalasala nanazava izy fa ara-bakiteny no tiany ambara amin'izany.
Nirotsaka ho kandidà mahaleotena ihany koa i Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, izay mpikambana tao amin'ny PAN teo aloha. Vadin'ny filoha teo aloha Felipe Calderón izy ary efa mpanao lalàna. Na dia izany aza, tamin'ny 15 May, nanambara ny vadin'ny filoham-pirenena teo aloha fa hiala amin'ny fifaninanana indray izy.
Mifarana eto ny fampahafantarana ataonay momba ireo kandidà handimby an'i Enrique Peña ho filohan'i Meksika. Amin'ny lahatsoratra manaraka, dia hijery ny fitsapan-kevitra isika ary koa ny toe-draharaha ankapobeny ao amin'ny firenena izay katsahan'ireo te-ho filoham-pirenena hotantanana.